10 Ụzọ ọcha ratụ ratụ faịlụ site iPhone e
Nhicha junk faịlụ site na gị iPhone bụ agaghịkwa a hassle. Ị nwere ike mfe na-eme nke a iji ihe ọ bụla nke usoro nyere n'okpuru:
Nkebi nke 1: Ngwọta 01 - Malitegharịa ekwentị
Part 2: Ngwọta 02 - Nso meghere égwu
Part 3: Ngwọta 03 - Doro Anya History na weebụsaịtị Data (site na Ntọala)
Part 4: Ngwọta 04 - Doro Anya History na weebụsaịtị Data (site Safari)
Part 5: Ngwọta 05 - Wepụ égwu
Nkebi nke 6: Ngwọta 06 - Tọgharia iPhone
Part 7: Ngwọta 07 - Doro Anya ratụ ratụ Files na PhoneClean
Nkebi nke 8: Ngwọta 08 - Doro Anya ratụ ratụ Files na ejibeghi égwu na Wondershare SafeEraser
Part 9: Ngwọta 09 - Doro Anya ratụ ratụ Files na BatteryDoctor
Part 10: Ngwọta 10 - Doro Anya Ram na Battery Doctor
Ngwọta 01 - Malitegharịa ekwentị
Ọtụtụ ugboro a dị mfe Malitegharịa ekwentị mma na arụmọrụ nke gị iPhone dị ka ọ na-emechi niile meghere ngwa ọdịnala na ewepu ruo nwa oge faịlụ na junk data si ebe nchekwa na-akpaghị aka. Iji Malitegharịa ekwentị gị iPhone:
Long pịa Ụra / Tetanụ button na gị iPhone.
Ozugbo slide na ike anya ozi-egosi na ihuenyo, pịa ma ịdọrọ egosipụta Ike button n'aka-ekpe.
Chere ruo mgbe gị iPhone ike anya kpamkpam.
Ozugbo mere, na-eche maka ọzọ 10 sekọnd na ogologo pịa Ụra / Tetanụ button ruo mgbe Apple logo-egosi na ihuenyo.
Ngwọta 02 - Nso meghere égwu
Mgbe ị na-eji gị iPhone maka a di na nwunye nke ụbọchị na ị na-amalite na-enwe ya na-ebelata ịrụ ọrụ, ị nwere ike imechi niile meghere ngwa ọdịnala na-enweghị ibidogharịa ekwentị gị. Mgbe meghere ngwa ọdịnala na-emechi, ha nile kwekọrọ ekwekọ nwa oge faịlụ na-ehichapu si na ebe nchekwa dị ka mma. Iji na-emechi niile meghere ngwa:
1. Site na Ihuenyo gị iPhone, abụọ-pịa Home bọtịnụ.
2. Ozugbo thumbnails niile meghere ngwa ọdịnala na-egosipụta, kpatụ na ịdọrọ ọ bụla thumbnail elu imechi kwekọrọ ekwekọ ngwa.
3. Megharịa nzọụkwụ 2 n'ihi na onye ọ bụla nke gosipụtara thumbnail ruo mgbe ị na-ekpe nanị na onye na-anọchi anya Home ihuenyo. (Nke a na ọ dịghị onye pụrụ ga-ewepụ.)
4. Pịa Home button ọzọ na-azụ ndị nkịtị na-ele na-amalite na-eji gị iPhone kwesịrị.
Ngwọta 03 - Doro Anya History na weebụsaịtị Data (site na Ntọala)
Ọtụtụ n'ime ndị ugboro kuki na akụkọ ihe mere eme nke weebụsaịtị ị gara na-erepịaghị a bukwanu ego nke ohere na gị iPhone si nchekwa. Wepụ ọmụma dị otú ahụ n'ụzọ dị ịrịba ama mma bịa arụmọrụ nke ngwaọrụ. Ikpochapụ akụkọ ihe mere eme na website data si Ntọala window:
1. Site na Ihuenyo, enweta Ntọala akara ngosi.
2. Chọpụta na enweta na Safari ngwa si ​​Ntọala window.
3. Site Safari window, si n'okpuru Nzuzo & Nche ngalaba, enweta Doro Anya History na weebụsaịtị Data.
4. Site nkwenye igbe na Pop elu, enweta Doro Anya History na Data.
Cheta na: Nke a na usoro bụ ihe kasị irè mgbe ị na-eji atọ ọzọ na-web nchọgharị ka Opera, Chrome, wdg tinyere Safari nke bụ ndabere nchọgharị na iPhones.
Ngwọta 04 - Doro Anya History na weebụsaịtị Data (site Safari)
Ọ bụrụ na ị na-eji nanị Safari maka sọọfụ web na gị iPhone, ị nwekwara ike ikpochapụ akụkọ ihe mere eme na website data si n'ime nchọgharị na weebụ onwe ya. Ikpochapụ akụkọ ihe mere eme na website data si Safari:
1. Site na Ihuenyo gị iPhone, enweta Safari akara imeghe nchọgharị na weebụ.
2. Site na ala nke meghere Safari si interface, enweta na ibe edokọbara akara ngosi (-anọchi anya ya ngosipụta nke meghere akwụkwọ).
3. Site Ibe edokwubara window, enweta History si egosipụta ndepụta.
4. Site na ala nke History window, enweta Doro Anya.
5. Ozugbo Doro Anya akụkọ ihe mere eme nkwenye igbe na-egosi, enweta Doro Anya All History ọcha niile junk faịlụ anakọtara na ekwentị gị.
Ngwọta 05 - Wepụ égwu
Ọtụtụ ugboro arụnyere ngwa ike ma ọ bụ na-anakọta junk data ma n'aka ha onwe ha mgbe ha nọ na ojiji nke na Ịntanetị. Ebe ọ bụ na Apple adịghị ekwe ka ị na-ewepụ ndị dị otú ahụ data onwe gwụla ma ị na-eji a-atọ ndị ọzọ ngwa, ihichapụ onye mere ngwa kpam kpam site iPhone ewepu niile junk faịlụ dị ka mma. Ị nwere ike reinstall ngwa ke ama okodorode ya nke, ọ bụ ezie resets niile gị omenala mmasị azụ ndabara, ọcha na ebe nchekwa na mma bịa arụmọrụ nke ekwentị gị na-enweghị nsogbu ọ bụla. Iji wepu ihe ngwa gị iPhone:
1. Site na Ihuenyo, pịa Ntọala.
2. Site Ntọala interface, chọta na enweta na General nhọrọ.
3. Ozugbo General window emepe, ịchọta na enweta ojiji.
4. Site na ala nke ojiji window, mgbata Jikwaa Nchekwa.
5. Na Nchekwa window, si egosipụta ndepụta nke arụnyere ngwa, enweta onye na kasị elu data ojiji (ma ọ bụ onye ị na-eche bụ ihe mere n'azụ umengwụ arụmọrụ nke gị iPhone). (Ozi na-ẹmende maka ngosipụta ebe a.)
6. Site ngwa si ​​interface, mgbata Hichapụ App.
7. Ozugbo nkwenye igbe na-abịa, kpatụ Hichapụ App.
Ngwọta 06 - Tọgharia iPhone
Ọ bụrụ na ị na-egwuri na gị iPhone n'ihi na ogologo na arụnyere ngwa anakọtara a bukwanu ego nke 'irighiri', atọgharịa ekwentị gị azụ ndabere ga-gị mma nzọ. Iji tọgharịa gị iPhone-ewepụ ihe niile na junk data:
2. Site Ntọala window, enweta General.
3. Site na ala nke egosipụta General window, pịa Tọgharia.
4. Ozugbo Tọgharia window abịa, enweta ihichapu niile ọdịnaya na Ntọala.
5. Site nkwenye igbe na Pop elu, enweta ihichapu iPhone.
Ngwọta 07 - Doro Anya ratụ ratụ Files na PhoneClean
PhoneClean bụ a-atọ ndị ọzọ na-eji ngwa ọcha junk faịlụ site na gị iPhone. Ọcha-achọghị data gị iPhone iji PhoneClean:
Download PhoneClean si http://www.imobie.com/phoneclean/ URL.
Mgbe nbudata, wụnye ihe omume na gị Windows ma ọ bụ Mac PC.
Ẹkedori PhoneClean site abụọ-ịpị ya akara ngosi.
Site meghere interface, pịa Quick ọcha.
Site ọzọ window, họrọ ụdị nke faịlụ ma ọ bụ data na ị chọrọ ọcha.
Pịa Malite iṅomi na-eso na ihuenyo ntụziaka si n'ebe iṅomi ma wepụ junk faịlụ site na gị iPhone.
Ngwọta 08 - Doro Anya ratụ ratụ Files na ejibeghi égwu na Wondershare SafeEraser
Ọzọ, ma eleghị anya ihe kasị oru oma ngwá ọrụ na ahịa ikpochapụ junk data na ejibeghi ngwa site gị iPhone. Ikpochapụ junk faịlụ na ndị ọzọ ejibeghi ngwa site gị iPhone iji Wondershare SafeEraser:
1. Download Wondershare SafeEraser n'okpuru maka Windows ma ọ bụ Mac karị.
2. Dị ka kwa n'elu ikpo okwu nke sistemụ arụnyere na gị na PC, wụnye Wondershare SafeEraser na kọmputa gị site na iji mgbe nwụnye usoro.
3. Launch Wondershare SafeEraser site abụọ-ịpị ya akara ngosi.
4. Na mbụ interface, Mgbe kpaliri, jikọọ gị iPhone gị PC na iji USB data USB na bịara tinyere na ya.
5. Chere ruo mgbe achọrọ ọkwọ ụgbọala maka ejikọrọ ekwentị na-arụnyere.
6. Ozugbo mere, si egosipụta nhọrọ, pịa 1-Click nzacha na mkpocha nhọrọ (button na a sweeper nnọchianya).
7. Chere ruo mgbe Wondershare SafeEraser enyocha kwa maka log faịlụ, synch cache faịlụ, video na ọdịyo log faịlụ, na ejibeghi ngwa ọdịnala na gị iPhone.
8. Ozugbo faịlụ na-hụrụ, ego ma ọ bụ uncheck checkboxes na-anọchi anya ụdị faịlụ na ị chọrọ iji wepu ma ọ na-karị.
9. N'ikpeazụ pịa nzacha na mkpocha button na ala wepụ achọghị faịlụ site na gị iPhone.
10. Chere ruo mgbe họrọ akpọkwa na-wepụrụ gị iPhone.
Ngwọta 09 - Doro Anya ratụ ratụ Files na BatteryDoctor
Batrị Doctor bụ a free ngwa iji kpochapụ ihe junk faịlụ site na gị iPhone. Na-ebuli gị iPhone iji Battery Dọkịta:
1. Download Battery Doctor si https://itunes.apple.com/us/app/battery-doctor-must-have-battery/id615987910 njikọ.
2. Wụnye usoro ihe omume gị na iPhone.
3. Launch Battery Doctor site na ịme ọpịpị ya akara ngosi si Home ihuenyo.
4. Mgbe kpaliri, anabata Ikikere nkwekọrịta.
5. Ozugbo mere, na ala nke meghere isi interface nke ngwa, enweta ratụ ratụ nhọrọ.
6. Site ratụ ratụ window, enweta Hichaa Cache bọtịnụ.
7. Ozugbo Akpachara igbe Pop elu, enweta Clean.
8. Chere ruo mgbe junk faịlụ na-scanned na wepụrụ gị iPhone.
Ngwọta 10 - Doro Anya Ram na Battery Doctor
Na mgbakwunye na-ekpocha junk faịlụ site na gị iPhone, Battery Doctor nwekwara boosts ekwentị gị na ebe nchekwa. Iji mee otú ahụ:
1. Soro nzọụkwụ si 1 na 4 kọwara na Ngwọta 06 ibudata, wụnye, ẹkedori Battery Doctor, na-anabata Ikikere nkwekọrịta.
2. Site na ala nke meghere interface, enweta na ebe nchekwa nhọrọ.
3. Na ebe nchekwa enyem window, chere ruo mgbe Battery Doctor-enyocha kwa na ebe nchekwa na anya maka na-achọghị ọmụma na ike ga-wepụrụ gị iPhone.
4. Ozugbo ngwa completes scanning usoro, mgbata agbam ume.
5. Chere ruo mgbe Battery Doctor boosts ekwentị ebe nchekwa site na iwepu nwa oge faịlụ na ndị ọzọ junk data gị iPhone.
6. Ozugbo usoro completes, kpatụ Emela.
Nhicha gị iPhone si ebe nchekwa site ekpocha na junk faịlụ na ndị ọzọ na-achọghị 'irighiri' dị mkpa. Ị nwere ike iji ihe ọ bụla nke dị n'elu ụzọ na-ebuli gị iPhone na iji ekwentị gị rụọ ọrụ nke ọma.
> Resource> Clean-elu> 10 Ụzọ ọcha ratụ ratụ faịlụ site iPhone